Bluetooth Box (9)
JBL Charge mini ( Bluetooth speaker )
22,000 Ks. 25,000 Ks.
JBL brand ကြိုက်သူများအတွက် သီချင်းများကို တောက်လျောက် bluetooth ချိတ်ဆက်ဖွင့်နိုင်ပြီ2နာရီ ခွဲ အားပြန်ဖြည့်ရုံဖြင့် အားအပြည့် ပြန်ပြည့်တဲ့ first copy စပီကာ လေးဖြစ်ပါတယ်။ စပီကာ အသံထွက်မှာ ပေးရသေား ငွေ နှင့် တန်သေား အံမခန်း ညက်ညေားစုံလင်သေား bass သံကောင်းကောင်း ထွက်ရှိပါတယ်။ တကိုရည်သုံး သူများ ၊ brand နာမည် ကြိုက်သူများအတွက် ဈေးနှုန်း..